Madaxwayne kuxigeen - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Madaxweyne ku xigeen)
Madaxweyne ku xigeen (; ; ) waa madaxa labaad ee ugu sareeya dowlad wadan ama dal. Sida caadiga ah, madaxweyne ku xigeenku waxa uu madax u yahay dhamaan xubnaha dowlada ee madaxtooyada. Waxaa mararka qaar dhacda in ra'iisul wasaaruhu ka awood sareeyo madaxweynaha. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne ku xigeenku waxaa inta ugu badan ku soo baxaa doorasho shacabka ama golle.
Madaxweyne ku xigeen waa nin madax ah oo madaxweynaha doorto. madaxweeyne kuxigeenka, waxaa loogu tala galay, haddii oo madaxweeynaha jiito, in oo booskiisa galo.
Dhinaca kale, ereyga "madaxweyne" waxaa sidoo kale isticmaala ururada madaxa banaan, shirkadaha ganacsiga iyo xisbiyada; kuwaasi oo macnaha ereygu u taagan yahay "qofka ugu sareeya ururkaasi ee go'aanka ugu dambeeya gaadhi kara". Madaxwayne kuxigeen waa jagada labaad ee dawlad shirkad amaba wax kasta oo xila oo leh madaxweyne.
2 La Xidhiidha
Sharaxaad[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Madaxweyne waa taliyaha ugu sareeya ee dowlad kaasi oo ku soo baxa doorasho shacab ama golle. Madaxweynuhu wuxuu talada heyn karaa wakhti go'an oo inta ugu badan u dhexeysa 4 sano ilaa 8 sano. Inta ugu badan dowlada caalamku waxay leeyihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen kuwaasi oo talada la wareega wakhti isku mid ah. Hadii madaxweynaha wax gaadhaan ama geeriyoodo waxaa talada dalkaas la wareega madaxweyne ku xigeenka.
La Xidhiidha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Madaxwayne_kuxigeen&oldid=166307"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Febraayo 2017, marka ee eheed 15:32.